Murtee Tiraampi waa'ee Yerusaalem: Ameerikaan marii Abbaas waliin karoorfattee akka haquu dandeessu akeekkachiifte - BBC News Afaan Oromoo
Murtee Tiraampi waa'ee Yerusaalem: Ameerikaan marii Abbaas waliin karoorfattee akka haquu dandeessu akeekkachiifte
Goodayyaa suuraa Fakkii balaleeffannaa Tiramp West Baank keessatti kaafame
Erga Waashiingitan Yerusaalem akka magaalaa guddittii Israa'el taate beekamtii kennitee Ameerikaan marii Pirezidaantii Itti-aanaa Maayik Peensi Maamud Abbaas waliin karoorfame haquu akka dandeessu Filisxeemiin akeekkachiifte.
Marii Peensiifi Pirezidaantii Filisxeem Maamud Abbaas waliin dhuma ji'a kanaarratti qabame haquun "miidhaa qaba", jetti Ameerikaan.
Anga'aan Ol-aanaa Filisxeem yeroo darbe Peensiin hin simannu jedhee ture.
Beeksisa Doonaaldi Tiraampi Yerusaalemirratti torbana kana keessa dabarse imaammata Ameerikaan haala Yerusaalem ilaalchisee waggoota kurnaniif qabaachaa turte jijjiireera.
Poolisoonni Israa'el gaazii imimmaanessu, rasaasa gommaa fi rasaasaa mormitoota Paalestaayin itti dhukaasan.
Gaafa Kamisaa, yoo xiqqate Filisxeemonni 31 Kutaa Gaazaafi guutummaa Wasti Baankii jiran walitti bu'insa tureen madaa'aniiru.
Westi Baankiitti aarii Westi Yerusaalemittimmoo gammachuu
Walitti bu'insi kun jijjiirama imaammataa Tiraampiin kakkaafame. Jimaata har'aa kanas daangaa Filisxeemirratti mormii caalaatu eegama.
Gareen Isilaamaa Filisxeem kan ta'e Hamaas intifaadaa/sochii ykn mormii haarawaatiif waamicha dhiyeesseera.
Israa'el loltoota dabalataa gara Wasti Baankitti bobbaasteetti.
Deggertoonni dhiyoo Ameerikaa baayyeen jijjiirama imaammata Waashingiteen kana waliin walii hin gallu jedhan; Manni Maree Nageenyaa Mootummoota Gamtoomaniifi Liigiin Arabaa deebi isaanii murteessuuf guyyoota dhufutti walga'uuf jiru.
Falmiin waa'ee marii Abbaas-Peensi attamitti uumame?
Gaafa Kamisaa, Waayiti Hawuus akka jedhetti Pirexidaantiin Itti-aanaa akkuma qabametti gaggeessuuf jira.
Peensi "ammallee Abbaasiifi gaggeessitoota Filisxeem waliin wal arguuf fedha, kanaaf murteen marii kana keessaa ba'uu miidhaa qaqqabsiisu qaba ," jedha aanga'aan Waayiti Hawuus.
Yeroo daawwannaa kan walakkaa ji'a Muddee keessa qabame kanatti, Peensi Israa'eliifi Masiriin ni daawwata jedhamee eegama.
Gaafuma kana ganama, Jibriil Raajuub, aanga'aan ol aanaa Paartii Faatahaa Abbaas daangaa Filisxeem keessatti Peensiin "Hin simannu" jedhan.
Itti dabaluun Raajuub walga'iin gaggeeessaa Filisxeem waliin hingaggeeffamu jedhan. Abbaas dhuunfaan dhiimmicharratti yaada hin kennine.
Tiraampi maaliff imaammata Ameerikaa jijjiire?
Tiraampi murtee kana gaafa Roobii beeksisan. Pirezidaantiin Ameerikaa kun: "Ani murtee kana akka fedhii ol-aanaa Ameerikaa ta'eefi fedhii nagaa Israa'eliifi Filisxeem gidduu jiru akka ta'ettan fudhadha."
Imbaasii Ameerikaa Teel aviivirraa gara Yerusaalem geessuudhaaf qophii akka jalqabanis dhimmi alaa Ameerikaa qajeelchaan ture jedhan.
Ameerikaan furmata biyyoota lamaaniin taasifamu- dhumarratti akka bara 1967n duraatti toora Wasti Baanki, Kutaa Gaazaafi Yerusaalem Bahaa lola dhaabanii biyya Filisxeem of dandeesse uumamtee nagaadhaan Israa'el waliin jiraattu- " yoo gama lamaaniin irratti walii galan" ni deggerti, jedhan Tiraampi.
Pirezidaantichi ibsa Israa'el magaalaa Yerusaalemiin akka isheen "magaalaa guddittii bara baraafi hin hiramne" jettu fayyadamuurraa of qusataniiru. Filisxeemonni Yerusaalem Bahaa akka magaalaa guddittii biyya Filisxeem gara fuula duraa taatu barbaadu.
Deebiin maaltu ture?
Muummichi Ministeeraa Biiniyaam Netineyaahoo akka jedhanitti, Israa'el Tiraampiin nama "seenaa magaalaa guddittii kana waliin akka yaadatamu of taasise" baayyistee galateeffatti.
Israa'el "biyyoonni biroos fakkeenyummaa kana akka hordofan" ni barbaaddi jedhan. Filiippinsiifi Rippaablikni Cheek miidiyaa Israa'elirratti dubbatamanillee, maqaa biyyoota kanneen tokkollee hin kaasne.
Waayiti Haawus biyya kamitu akka yaada Tiraampi hordofu akka quba hin qabne dubbate.
Gama Filisxeemiin faarri baayyee addadha.
Gaggeessaan Hamaas, kan Kutaa Gaazaa baayyinaan qabatan Jimaatarra " guyyaa mormii" waamaniicha dhiyeessanii "guyyichi qubattootarratti guyyaa intifaadaa/mormii jalqabaa" ta'uu qaba jedhan.
Miseensonni Hamaas "balaa tarsiimaawaa kana dura dhaabbachuudhaaf" "guutummaatti qophaa'oodha, jedhe Ismaayil Haniyaa haaswa Gaazaa keessatti taasiserratti.
Paartiin Faatah ammoo komii Mana Maree Nageenyaa Mootummoota Gamtoomaniitti dhiyeeffachuufi akka Liigiin araba ejjennoo cimaa qabaatan gochuun karaa dipilomaasii mormuu barbaada.
"Akka Ameerikaan karaa adeemsa nagaa kamiyyu ykn adeemsa siyaasaa kamiyyu deggeruufi ispoonsera gochuuf ga'umsa akka hin qabne labsina, "jedhu dubbi himaa Dr. Naasir Al-Kidwaa. "Sammuu keessa keenya, gama Kanaan hojii kamiyyu hojjechuuf akka humna dhabededha."
Biyyoota kamituu tarkaanfii Tiraampi balaaleffate?
Guutummaa biyyoota arabaafi Addunyaa Musiilimaarraa balaaleffannaa bal'aatu jira kan Pirezidaantiin Turkii Reseep Xaayip Erdoogaan Tiraampi "Naannicha boolla ibiddaatti darbataa jira" jechuun akeekkachiisan.
Gaggeessitoonni UK, Faransaayiifi Jarman hundi isaanii akka beeksisa Ameerikaa kana waliin walii hin galle dubbataniiru.
Viidiyoo Okkora murtee Tiraamp Yaruusalemiin booda
Addunyaan dhimma Yaruusalem irratti murtee US balaaleffatte